Isitolo esidayisa yonke impahla Usayizi Multi ecacile Matte Frosted Glass ikhandlela jar nge isivalo ifektri abakhiqizi | UWinby
ingilazi ikhandlela imbiza
1. Umshini uqhunyisiwe / ucindezelwe, usetshenziswe kabanzi endaweni yokudlela / ehhotela / ekhaya / ephathini njll.
2. Ilogo eyenziwe ngezifiso, iphethini, usayizi nombala njll kungenziwa ngokuya ngemidwebo yakho.
3. Eco-Friendly futhi non-enobuthi, ukudla grade grade ingilazi ephephile. Ayinayo i-BPA, lead, cadmium noma ezinye izinto eziyingozi emzimbeni womuntu. Ukupakisha okuphephile nokuqinile kokuthekelisa kuqinisekisa ukuthunyelwa kokuphepha.
Ngamagama, usayizi 、 logo 、 umbala ungenziwa konke ngendlela oyifisayo, ngokuqinisekile singakunika ikhwalithi enhle, intengo enkulu kanye nesikhundla esiphakeme ngemuva kwensizakalo yokuthengisa.
Iyaqeda Frosted / matte
Usayizi I-D7.2cm * H9.1cm D8.2cm * H9.8cm D9cm * H11cm D10cm * H13cm
Izinto Indebe yengilazi efriziwe nesembozo soqalo
Isisindo 225g 345g 420g 630g
Umbala White, black, grey, umbala kungenziwa egcizelele
Ukusetshenziswa Ukwenza amakhandlela / ukuhlobisa kwasekhaya
Ngaphezu kwalokho, izimbiza zekhandlela lengilazi zingenziwa ngemiphumela ehlukene, njengokufafaza kwe-matte-frosted, polished. Ungakhetha umphumela owuthandayo. Vele, uma ufuna ukuphrinta ilogo yakho noma amalebula enkomishini yengilazi, singakwenza futhi. Udinga nje ukusithumela imiklamo yakho, singakwenza ukukunikeza njengereferensi.
Langaphambilini Akunalutho lwembiza yamakhandlela engilazi yamatte
Olandelayo: iqhwa le-matte elinamakhaza elingenalutho ophethe ikhandlela-i-champagne / Oluhlaza
Jar Glass ikhandlela Jar
Ikhandlela Glass Jar Nge Lid Ngokhuni
Custom Glass ikhandlela Izimbiza
Engenalutho Glass ikhandlela Jar
frosted matte ingilazi ikhandlela ezingenalutho umnikazi-champag ...
frosted ezingenalutho ikhandlela esitsheni ingilazi jar